घर » प्रिमियम चर्किएको » HDD सुधारनेवाला फुट्नु – निःशुल्क डाउनलोड 1.71 क्रम संख्या + धार
HDD सुधारनेवाला फुट्नु – निःशुल्क डाउनलोड 1.71 क्रम संख्या + धार
HDD सुधारनेवाला फुट्नु HDD सुधारनेवाला को प्रिमियम संस्करण सक्रिय गर्न प्रयोग गरिन्छ. यो उपकरण ठीक आफ्नो कम्प्यूटर स्कैन र खराब क्षेत्रहरु तपाईँको हार्ड drive.It पनि हार्ड ड्राइभ मा समस्या हल र सामान्य अवस्थामा फेरि आफ्नो हार्ड ड्राइभमा गति देखि हटाउँदछ.HDD सुधारनेवाला टरेंट तपाईं नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ धेरै शक्तिशाली कार्यक्रम छ.
HDD सुधारनेवाला तपाईं आफ्नो ग्याजेट र प्रत्येक discovers परीक्षण गर्न मद्दत गर्छ र आफ्नो कठिन दबाब भयंकर क्षेत्रहरु reconstructs एक उपकरण छ.
आफ्नो पीसी गरेको कठिन शक्ति आफ्नो पीसी को सबैभन्दा महत्वपूर्ण additives को छ. यसलाई आफ्नो सबै डेटा भण्डारण गर्दछ र यसलाई सुरक्षित राख्छ. त्यसैले के अब राम्ररी काम गरिरहेको छ भने छैन हुन्छ?
डाउनलोड HDD सुधारनेवाला फुट्नु
HDD सुधारनेवाला फुट्नु
अनुप्रयोग खोजी गर्न समय भनेर मर्मतका गाह्रो ड्राइव. त्यो wherein छ HDD सुधारनेवाला 1.71 उपलब्ध उपलब्ध छन् सक्नुहुन्छ. यो लाभदायक उपकरण तपाईं भयानक क्षेत्रहरु जो आफ्नो कठिन शक्ति पढ्न नसकिने मा तथ्य गर्दै पत्ता लगाउन सक्छन् भनेर आफ्नो गाह्रो ड्राइभ डिस्क सतह स्क्यान सक्षम. भित्र अवसर तपाईं भयंकर क्षेत्रहरु छन् के, यो तपाईं आफ्नो कठिन ड्राइभमा भण्डारण गरेका जानकारी प्राप्त गर्न असम्भव हुन सक्छ, साथै प्रजनन यसलाई केही अन्य स्थानमा रूपमा. लामो दौरानमा, आफ्नो पीसी छैन पनि राम्रो अप बुट हुनेछ.
तपाईंलाई मनपर्न सक्छ: विन्डोज7किजेन
HDD सुधारनेवाला भयंकर क्षेत्रहरु को परिणाम केही उल्ट्याउन मदत गर्न सक्छौं आफ्नो गाह्रो जबर्जस्ती. मा कहिले काँही, यो तपाईं मामिलामा एक असाधारण मामला अवस्थामा आफ्नो कम्प्युटर चलिरहेको कायम राख्न सक्छौं भनेर परेशानी क्षेत्रमा पुनर्स्थापना गर्न सक्षम छ. अन्य उदाहरणहरु मा, HDDregenerator टरेंट न्यूनतम के तपाईं आफ्नो कठिन दबाव पूरै अद्यावधिक गर्न चाहनुहुन्छ भन्दा पहिले महत्वपूर्ण रेकर्ड प्राप्त गर्न संभावना प्रदान गर्दछ रूपमा.
HDD सुधारनेवाला लाभदायक छ यसलाई हार्ड ड्राइव को धेरै असाधारण प्रकारका समर्थन रूपमा. को बिल्डर्स यो लगभग पुनर्स्थापना सक्ने घोषणा 60% को कठिन ड्राइव. पनि अहिले एक शानदार प्रतिशतको रूपमा, यसलाई कुनै पनि आदर तपाईं थियो गर्न कुनै पनि विकल्प भएको छैन भन्दा माइल राम्रो छ. को handiest critique HDD सुधारनेवाला शायद प्रयोगकर्ता सुरु लागि चलाउन अलि perplexing छ कि छ.
मामला मा तपाईं आफ्नो हार्ड दबाव लागि रेकर्ड भयानक क्षेत्रहरु पुन: प्राप्त वा मर्मत गर्न एक तरिका चाहनुहुन्छ, दिन HDD सुधारनेवाला एक प्रयास.
← विन्डोज7किजेन – असीमित साधारण फुट्नु + धार Iphone जगेडा एक्स्ट्रेक्टर फुट्नु – किजेन टरेंट + सिरियल प्रमुख →